Mandalay Gazette Members များနှင့် အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ သိစေရန်……. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributors » Mandalay Gazette Members များနှင့် အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ သိစေရန်…….
Mandalay Gazette Members များနှင့် အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ သိစေရန်…….
Posted by Alpha Vanishing on Sep 4, 2012 in Contributors, Letter to The Editor | 26 comments
We don’t care u r အေးဝတီကြီး(or)သန်းထွှဋ်ဦး(or)ရိုဟင်ဂျာချစ်သူ(or)အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ….
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့Myanmar Cyber Army, Operation Rohingya, Myanmar Cyber Counter DDos Team တွေဟာ အမျိုးဘာသာ သာသနာကို စော်ကားလာတဲ့ မည်သည့်ပြည်တွင်း ပြည်ပ Site များကိုမဆို ပြန်လည်သတိပေး တိုက်ခိုက်နေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်
ယခုလည်း MG ကိုအသုံးပြုနေကြသော စာပေ၀ါသနာရှင်များ အကျိုးကိုရှေးရှု ပြီးတော့ သတိပေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်
အေးဝတီကြီး(or)သန်းထွှဋ်ဦး(or)ရိုဟင်ဂျာချစ်သူ(or)အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ… သည် ကျွန်တော်တို့cyber စစ်သူကြီးများ ကို စော်ကားတိုက်ခိုက်နေခြင်းအားရပ်တန့် ပေးရန် သတိပေးအပ်ပါသည်
.:: We Are Watching You ::.
Myanmar Cyber Army, Operation Rohingya, Myanmar Cyber Counter-DDos Team……
MG ကို လုံးဝ ထိန်းချုပ်ပြီး မလိုသူများကို ဖယ်ထုတ်သွားရန် (သို့ ) MG လုံးဝ down သွားရန် တစ်နည်းနည်းအသုံးပြု သွားမည်ဖြစ်ပါသည်……..
ခင်ဗျားတို့က ရှင့်ကြီးခိုးပါတယ် ဆိုနေမှ ..
ဖနောင့်နဲ့ ထပ်ပေါက်ချင်သေး ဆိုသလို ကျနေပြီ …
ခင်ဗျားတို့နဲ့ ကိုနာဂ နဲ့ အငြိုးအတေးက ကျုပ်အထင် ကြာပြီ ထင်ပါတယ် ..
ဒီတော့ အဲ့ဒီကိစ္စကို သူနဲ့ပဲ ရှင်းပေါ့ ..
ဘယ့်နှယ့် ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် ကျုပ်တို့ ဆိုက်ကို လာတိုက်ချင်နေရတာတုံး ..
ဒီမှာ ရေးနေ၊ ဖတ်နေတဲ့ လူတွေ အများစုက ကျုပ်တို့ရော ခင်ဗျားတို့ထက်ပါ
အသက်အရွယ်အားဖြင့် ကြီးသူတွေပဲ …
ဒါကြောင့် သူတို့ကို ရိုသေပါလို့ ကျုပ် ပြောချင်ပါတယ် ..
အမှန်ဘဲဗျ……ကျနော်ကတော့ အပြင်မှာ ရှင်းမယ်ဆို ရယ်ဒီဘဲ။
ဘယ်လို့သဘောက်မဲ့ကြောင့်MG ကိုတိုက်ခိုက်ချင်တာတုန်း၊ရေးတဲ့သူတွေက သူထင်တာမှန်တာရေး
မှာပေါ့။ ဘာကြောင့်MG ကိုသိမ်းပိုက်ချင်ရသနည်း၊ မင်းတို့သိမ်းချင်တိုင်းသိမ်းလို့ရမည်ထင်သတုံး။
ယခုမှ အင်တာနက်မြင်ဖူးသမှ သိပ်ဟုတ်တုံတုံ ထင်ကြတာပ၊ ချေးစားဦးနှောက် ငယ်ထိပ်တက်
ဆောင့်လာတာပ၊ နူတ်ခမ်း ချေးတွေထွက်ကျလာရင်ခက်ကုန်တာပ၊
အမှန်တရားက သာ သခင်ပ၊ မှားတာဆို ကိုယ်မျိုးမကောင်းတောင် မကောင်းပြောကြရတာပ။
အမျိုး ဘာသာ သာသနာဆိုသည်မှာ အဘယ်ကိုဆိုသနည်း၊ ငါယို့ မြန်မာမှဘာဘာသာမမရှိ
အားလုံးနိုင်ငံခြားကဘာသာချည်းဝင်ရောက်လာတာပ။ ကုလားပြည်ကဘာသာကို ငါရိုဘာသာဟု
အကိုပြောနေတာ ကျနော့်ကိုလား၊ကျန်နေတဲ့ သူတွေကိုတော့ အဲ့သူတွေကို သွားပြောလေဗျာ။
မဆိုင်တာ လျှောက်ဖြီးမနေပါနဲ့ ဗျာ။ကျနော်တို့ ရွာမှာ အေးဆေးနေ နေကြတာလေ၊ခါတော်မှီတွေ
ကျနော် စိတ်မ၀င်စားဘူး။ခင်များ သိပ် သတ္တိရှိနေရင် အပြင်မှာ ကျနော်နဲ့ ရှင်းပါ။ကျနော့် လိပ်စာ၊
ဓါတ်ပုံ အားလုံး ရွာထဲမှာရှိနေတယ်။ခင်များတို့ ရွာကို ပြသနာရှာမနေဖို့ တောင်းဆိုတယ်။
Say Goodbye everyone!!!!!
သတ္တိသိပ်ရှိရင် အယ်ကိုင်းဒါးဆိုက်တွေ သွားတိုက်ပါလားကွာ…။ လီးလိုမှိုလိုနဲ့ ရွာထဲလာ ပုဆိုးလှန်ပြနေတယ်…။ မင်းကို မယုံဘူး.. ရခိုင်အရေးအကြောင်းပြပြီး ဂဇက်ကို တမင်ဝင်မွှေနေတာ အသိသာကြီး… မင်း ထောက်လှမ်းရေး ဟုတ်ရင်ဟုတ် မဟုတ်ရင် မွတ်စ်ဖြစ်ရမယ်…ဒါမျိုးတွေ ရိုးနေဗီ…တောမှာသွားလုပ်….
ဟာ အူးကြောင်ကလည်း တောမှာမလုပ်ချင်လို့
MG ထဲလာပြီး Hack ဆိုပြီးလုပ်နေတာပေါ့
ကျနော်က တွေ့ ကြ၊ပြောကြဖို့ တောင်းဆိုနေတာကို အနီတွေဘဲပေးပြီးပြန်မပြော
တာကို ကြည့်ရတာ ပိုင်းလုံးလိုလို ထင်ရပါတယ်ဗျို့ ။
အေးဗျာ မနေ့ကဖွင့်တာ မရဘူး ကျုပ်ကလည်း သိပ်ကျွမ်းလှတာမဟုတ်ဘူး
ဆိုက်ကိုတော့ မလုပ်ကြပါနဲ့ လို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ ဘာသာ ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ အကျိုးပြု စာတွေ ၊ ရသစာတွေ ရေးနေဖတ်နေကြတာပါ
ခင်ဗျားတို့ ကိစ္စကို ပညာနဲ့ ဆို ပညာနဲ့ ပဲရှင်းကြစေချင်ပါတယ်
ဘာကိစ္စလည်း ဗျ ကို နာဂရရေ ….
ဘာမှန်းလဲ အတိအကျ ကို မသိရပဲ ဇွတ်ကို ခြိမ်းခြောက်ပြနေတော့တာပဲ
တစ်ကယ်ကို နည်းပညာတတ်ကျွမ်းတယ်ဆိုရင် မွတ်စလင်ဝက်ဆိုက်တွေကို လိုက်လုပ်ကြပါလား
နောက်ကို ပိုစ့်တင်ချင်ရင် တစ်ခြားအကြောင်းအရာ ရေးတင်ကွာ
တခုခုတော့ တခုခုဘဲ ပညာရှင်တွေက အိုင်ပီ စစ်တာကျွမ်းနေတယ်မို့လား
အင်း .. ဒုက္ခ .. ဒုက္ခ
“အမျိုးဘာသာ သာသနာကို စော်ကားလာတဲ့ မည်သည့်ပြည်တွင်း ပြည်ပ Site များကိုမဆို”
ခက်တော့ နေပြီဗျာ …..
အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး ရေ . ဖုန်းနံပါတ် လေး ပြန်တင် ပေး လိုက်ပါဗျာ …
ဖုံးနံပါတ်ကော ဖေ့ဖုတ် အကောင့်ရော အကုန်တင်ပေးလိုက် အေးချမ်း၏
ယခုလည်း MG ကိုအသုံးပြုနေကြသော စာပေ၀ါသနာရှင်များ အကျိုးကိုရှေးရှု ပြီးတော့ သတိပေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အင်းးးးးးးးဖြစ်နိုင်တာ တစ်ခုက ကျနော်ကိုတိုက်ခိုက်ချင်နေတာ သက်သက်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ ရွာသူားတွေကို အပြစ်ရှာချင်တဲ့ ပုံရပါတယ်။ခင်များတို့ အားနေလွန်းလို့ တိုက်ခိုက်မယ်
ဆိုရင် လဲ ကျနော့်domain ကိုလာဆော်လှည့်ပါဗျာ။ရွာကို မဆူပါစေနဲ့ ။ခင်များတို့ လူချင်းတွေ ဖြေ
ရှင်းဖို့ သတ္တိမရှိရင်လဲ ကျနော့် ဖုန်း၀၉၄၉၆၅၃၇၁၇ကို ဆက်လိုက်ပါဗျာ။ခင်များတို့ လဲ အနီတွေပေးနေရတာ
MG ထဲမှာ သတင်းကောင်းတွေ၊ ပညာပေးလေးတွေရေးတဲ့သူတွေလဲ ရှိသလို ပြသနာတစ်ခုကို ထပ်ခါထပ်ခါ မီးမွှေးပေးနေတဲ့သူတွေလဲရှိတာပါပဲ။ အရပ်ထဲမှာလိုပေါ့ဗျာ။ လူစုံပေါ့။
“MG လုံးဝ down သွားရန် တစ်နည်းနည်းအသုံးပြု သွားမည်ဖြစ်ပါသည်” ဆိုတော့ ကောင်းတဲ့သူကော မကောင်းတဲ့သူကော အားလုံးကို ကြွက်မနိုင် ကျီမီးနဲ့ရှို့သလိုမဖြစ်သွားဘူးလားခင်ဗျာ လုပ်မယ်ဆိုရင် လဲနဲနဲလေးလောက်စဉ်းစားပြီးမှလုပ်ကြပါ။
နောက်ပြီးနာမည်တွေကို or တွေနဲ့ခံရေးထားတော့ တစ်ယောက်ထဲ အကောင့်ခွဲပြီး ရေးနေတယ်လို့ စွတ်စွဲလိုက်ထင်တယ်နှော်။ သေချာသိကြတဲ့ သက်သေလေးတစ်ခုလောက်တော့ comment မှာရေးပေးစေချင်တယ်ဗျာ။
တစ်ခုပါပဲ ကျွန်တော်လဲခင်ဗျားတို့လိုပါပဲ အမျိုး ဘာသာ သာသနာစော်ကားလာရင် အသဲခိုက်အောင်နာပါတယ်။
ပို့စ်တင်ပီး လူသိများ ဖတ်စေချင်ရင်
ကောင်းရာ ကောင်းကျိုးရေးကြဗျာ ..
အူကြောင်ကြောင် နိူင်လွန်းတယ် ….
ကျနော်မျှော်နေတာ ဗျာ ခုထိလဲ ဆက်မလာဘူးဗျ။လူက အ နေတယ်ထင်ပါတယ်။
သင်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုသာ ၀င်ခွင့်ပြုမည်…
ဆိ်ိုသော..စာသားလေးကို သတိရပါတယ် ။
ကျွန်တော်ကတော့… ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ …
စည်းစည်းလုံးလုံးရှိစေချင်တယ် ။ တကယ်လို့ .. ချစ်ခင်လို့ မရလောက်အောင်..
အေးချမ်း သော.နည်းများနဲ့ သာ…..ရှင်း ကြပါ…လို့ ….
ဟာ ဒီလိုလုပ်တာတော့ မကောင်းဘူးဗျို့။ ခင်ဗျားတို့ဟာက မကျေနပ်ရင် ဒီဟာက စာရေးနေတဲ့ဆိုက်ဒ်ပဲ။ စာနဲ့ ပြန်ရေးပေါ့ဗျ။ အခုလို ခြိမ်းခြောက်တာတော့ မကောင်းတာ သေချာတယ်ဗျာ။ အမယ်လေး ကိုယ့်ထက် အများကြီးကို ဆိုးတဲ့လူတွေ ရှိနေပါလား။
“ကျွန်တော့် ဟပ်ရအောင် အစ်ကိုက ခွေးလား .. တဲ့”။ .. Credit to သူရသာဝါ